साँचो प्रेम हो या मात्र आकर्षण भनेर कसरि थाहा पाउने ? - यादका टुक्रा
2 years ago 18322 Views
Don't Miss it ब्रेकअपको पीडालाई कसरि भुलाउने?
Up Next यस्ता तरिका अपनाएर आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुहोस्।
बिहे गर्नु अगाडी नै यी ४ बानी हटाउनु राम्रो नत्र दिनदिनै लफडा पर्छ पर्छ
सबैजनाको आ-आफ्नै किसिमको बानी हुन्छ । उनीहरूको आफ्नै सोच हुन्छ तर जब यो विवाहको कुरा आउँदछ वा यदि तपाईं कसैसँग…
यी आठ अवस्थामा हानिकारक हुनसक्छ, बेसार-दुधको सेवन
दुध र बेसारको आ-आफ्नै औषधिय महत्व छ । यी दुईको मिश्रण अझ स्वस्थ्यबर्द्धक हुन्छ । त्यसैले सुत्नुअघि नियमित रुपमा वेसार…
6 months ago 987 Views
बजार हिंड्न भनेर मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दैगर्दा ऊ पनि फुत्त बाटोमा निस्किइ। मलाइ देख्ने बित्तिकै बोली हाली “बजार जान लागेको हो?…